ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – ဆောင်းဦးပန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – ဆောင်းဦးပန်း
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – ဆောင်းဦးပန်း
Posted by kai on Nov 27, 2012 in Contributor, Columnist, Interviews & Profiles | 14 comments
စက်တင်ဘာ၂၉၊၂၀၁၂တွင် လော့အိန်ဂျလိစ်မြို့ Shan Social &Cultural Societyမှ ကျင်းပသောဂုဏ်ပြုညစာစားပွ္ပဲ္ပတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးခဲ့သော Shan Social &Cultural Society အသင်းဥက္ကဌဒေါက်တာစိုင်းထွေးမောင်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိ်ပါတည်။
ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာက၁၉၄၇ပင်လုံစာချုပ်ကပေါက်ဖွားလာတာ။ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့့ရည်မှန်းချက်ပဲ။ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်တာလည်း ဒီဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပဲ။ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာEquality, self determination, Ethic nationality, right culture စတဲ့ တန်းတူရည်တူစစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုဖြစ်ရမယ်။ ဒီဟာကလဲဗိုလ်ချုပ်တို့ ရှမ်း၊ကချင်၊ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပင်လုံစာချုပ်မှာသဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့SLAD (Shan Nationalities League for Democracy) , UNA (United Nation Alliance)တိုိ့လိုချင်တာလဲ စစ်မှန်တဲ့ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုပဲ။ UNAဆိုတာ၁၉၉၀ရလာဒ်ပေါ်မူတည်ပြီးဖွဲ့ထားတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကတိပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူး။အမျိုးသားညီလာခံတက်ခွင့်မရဘူး။စစ်မှန်တဲ့ဖယ်ဒရယ်ပေါ်လာဖို့UNA ကလဲရည်ရွယ်တာဘဲ။အစိုးရက ကတိပေးထားလျက်နဲ့မတည်ခဲ့ဘူး။ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ တိုင်းရင်းသားတွေကဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းတယ်ဆိုတာ အဆီအငေါ်မတည့်ဘဲတောင်းခဲ့တာမှမဟုတ်တာ။ လွတ်လပ်ရေးမတိုင်ခင်ထဲက ဗမာ-တိုင်းရင်းသားသဘောတူခဲ့ကြတာဘဲ။၁၉၆၀ကရေးခဲ့တဲ့ရှမ်းမူ (ဖယ်ဒရယ်မူ)ဆိုတာရှိတယ်။ ဦးနေ၀င်းကဒါကိုခွဲထွက်တဲ့မူဆိုအကြောင်းပြပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့တာဘဲ။ ၁၉၄၇အရ“၁၀နှစ်နေရင် ပြည်ထောင်စုခွဲထွက်ခွင့်ရမယ့်မူ”ပါလာတယ်။ရှမ်းတွေက
ဒါတွေကိုမသုံးပါဘူး။ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျနော်တို့ပါတီကနိုင်တော့ အမျိုးသားညီလာခံကြီးကို ၁၉၉၂မှာ တက်ခဲ့တယ်။တိုင်းရင်းသားတွေ တန်းတူခွင့်၊ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တွေတင်ပြတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် အာမခံချက်တွေအခြေခံဥပဒေမှာမပါတဲ့အတွက် အန်အယ်လ်ဒီပြီးရင်ကျနော်တို့ထွက်လာခဲ့တာဘဲ။ ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာ ခွဲထွက်တဲ့မူဆိုပြီးတော့ ဦးနေ၀င်းပြောတာကြာခဲ့ပြီ။ ကျနော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာခွဲထွက်တဲ့စနစ်မဟုတ်ကြောင်း ပြည်သူတွေကိုအသိပေးချင်တယ်။ “ပူးပေါင်းခြင်း”သာဖြစ်ပါတယ်။ “ခွဲထွက်ခြင်း”လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေ တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေး မရှိခဲ့လို့သာ ဒေသတွင်းမှာရော၊ကမ္ဘာမှာပါ နှစ်၅၀မှာ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ် မပြောလိုပါဘူး။
အခုနေခါမှာ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာစစ်တပ်ရှိတယ်။၉၀ပါတီUNA ရှိတယ်။ ရခိုင်၊ရှမ်း၊ဇွန်မီး၊မွန်၊ကိုးကန့်ပါတီကတဖွဲ့။
ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ ။ပြည်ပမှာ UNFC (United Nationality Federal Council)ရှိမယ်။ UNFCက၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံဘူး။ သူတို့ကလည်းအန်ကယ်တို့သွားချင်တာနဲ့တူနေတယ် ။ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့လုပ်ကြတယ်။အစိုးရကလည်းသိတယ်။အစိုးရဘက်ပိုင်းကလည်း ပြည်ပကိုထွက်ပြီး ဂျာမနီ၊အမေရိကား၊အီးယူ နိုင်ငံတွေကိုသွားလေ့လာကြတယ်။ အဲဒီ့လို လေ့လာခဲ့ကြလို့လည်းသူတို့ဘက်က ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာခွဲထွက်တာမဟုတ်မှန်းသိနေပြီ။စစ်မှန်တဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ဖို့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးက၀ိုင်းလုပ်ရမှာပါ။ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် အတင်းတွန်းတင်နေတာပဲလေ ။ပြည်သူတွေကလည်းအထင်မမှားဖို့မကြောက်ဖိုို့လိုတယ်။
ခုချိန်ခါမှာလဲ တိုင်းပြည်ကြီးကအားလုံးဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ရမှာ။ ဦးသိန်းစိန်၊ဒေါ်စု ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘူး။
နှစ်၅၀ကျော်ခဲ့ပြီ။တိုက်ခဲ့တာ။ထပ်ပြီးဓာတ်ဆီမလောင်းချင်တော့ဘူး ။ပြည်တွင်းကဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလည်း ပြောင်းချင်ပြီ။နေ့ချင်းညချင်းတော့မရဘူးပေါ့။ အားလုံးပါဝင်နိုင်မှအစိုးရသစ်ချတဲ့မူတွေ အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။
၄။အန်ကယ် ထောင်ဒဏ်၉၃နှစ် အချခံခဲ့ရတယ်နော်။
၂၀၀၅မှာ ကျနော့်ကို ထောင်ဒဏ်၉၃နှစ်စီရင်ခဲ့တယ်။ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာပြစ်မှုမှမကျုးလွန်ခဲ့ရဘဲ ရွက်ဆစ်နဲ့ဆက်တယ်ဆိုပြီး ထောင်ချခဲ့တယ်။ ဘာသက်သေမှလည်းမရှိဘူး။ အဲဒီ့အတိုင်မီနှစ်တွေက အစိုးရဘက်ကဘဲ တိုင်းရင်းသားအခြေအနေနဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်စီတွေကို တိုင်းရင်းသားတွေအလိုက်ဖွဲ့ပါပြောတယ်။ KIA, SSA, မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ပလောင်တိုးတက်ရေးပါတီတွေပေါင်းပြီးဖွဲ့ခဲ့တယ်။၂၀၀၄စက်တင်ဘာမှာမှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကချင်ကိုသွားတော့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုကြိုခဲ့သလိုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် ခမ်းခမ်းနားနားကြိုခဲ့တာပဲ။ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကို ၂၀၀၄မှာဖမ်းတယ်။၂၀၀၅ဖေဖော်ရီမှာကျ ရှမ်းကိုဖမ်းတယ်။
ကျနော်၂၀၁၂၊ဇန်န၀ါရီ၁၃မှာ ပြန်လွတ်လာတယ်။ပြည်ထောင်စုအဓွန့်ရှည်အောင် တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်ဆက်လုပ်မယ်။တိုင်းပြည်အနေအထားကလည်း ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့သမတနဲ့သူ့အစိုးရကရှိနေပြီ။ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာလည်း အားလုံးကတထောင့်တနေရာကပါဝင်ရမယ်။ အပြောင်းအလဲဆိုတာ တိုင်းရင်းသားအလိုက်၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအလိုက် ၀ိုင်းလုပ်မှရမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရန်ဖြစ်နေမယ်။ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က ကမာ့မြေပုံပေါ်ကပျောက်လိမ့်မယ်။ကျနော်အမြဲပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ ဧရာဝတီသည် တရုတ်နဲ့ကုလားနယ်ခြားမြစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ NEDကပေးတဲ့ဆုကတော့ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာ ဘ၀တွေ၊အသက်တွေပေးသွားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပါပေးတဲ့ဆုလို့ယူဆပါတယ်။
၆။မြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲအတွက် ပြည်ပအင်အားစုတွေအခန်းကဏ္ဍကရော အန်ကယ်ဘယ်လိုမြင်ပါလဲ။ပြည်ပကနေနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာ ထိရောက်မှုမရှိဘူး ပြောဆိုနေတာတွေကိုလည်း အန်ကယ်ဘယ်လိုမြင်ပါလဲ။
အပြင်ရောက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေကိုလည်း ပြောင်းနေတဲ့အရှိန်အဟုန်ထဲပါလာဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ အတွင်းကလူတွေထက်တောင် အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်တာပဲ ။နိုင်ငံတကာပံ့ပိုးမှုလည်းရှိနေပြီ။အစိုးရကprocessတခုလုံးကို အားပေးနေပြီ။ မလိုလားတဲ့အင်အားစုလည်းရှိမှာပဲ။ ဒါကိုပြသနာကြီးမဖြစ်အောင်သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့လုပ်ကြရမယ်။အစိုးရကလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့သူလုပ်နေတယ်။သူ့မူနဲ့သူလုပ်တယ်။ တချိန်တခါမှာ လွှတ်တော်ပြင်ပကအင်အားစုတွေလည်း ဆုံချက်တခုမှာဆုံပြီးဖြစ်လာမှာပါ။ကိုယ့်မိသားစု၊ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုပစ်ပြီး အပြင်ထွက်နေကြသူတိုင်းဟာ အသုံးမကျလိုမဟုတ်ဘူး။ အပြင်အတွင်းတစည်းတလုံးထဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒီလူတွေလည်း အခါအခွင့်သင့်သလို ပါရမယ်။ခုဒီနေ့မှာဆိုလည်း မျိုးဆက်သစ်တွေတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်။
၇။အန်ကယ့်အနေနဲ့ မန္တလေးဂဇက်သတင်းစာကနေတဆင့် ပြည်သူတွေကိုနောက်ထပ်ပြောချင်တာများရှိရင်။
လူထုအနေနဲ့သံသယမရှိဘဲ စစ်မှန်တဲ့ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ ဗမာအများစုက Federal ကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်ရဲရဲအာမခဲရဲတာကတော့ ပြည်ထောင်စုကနေခွဲထွက်မသွားဘူးဆိုတာပါဘဲ။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ ဗမာတမျိုးထဲနေတဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေပူးပေါင်းနေထိုင်နေတာပါ။ အားလုံးသဟဇာတဖြစ်ပါမှ တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဒီထဲမှာလည်း တိုင်းပြည်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်ချင်တဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်။တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပြီးကြည့်ပါ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
(ရတဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ မန္တလေးဂဇက်အင်တာဗျူးကို ဖြေကြားပေးခဲ့သည့် ဦးခွန်ထွန်းဦးကိုကျေးဇူုးတင်ပါသည်။)
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂဇက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ထုတ်တွင် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဖယ်ဒရယ်ပုံစံနဲ့.. ဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေအကြမ်း.. အခုရန်ကုန်မှာရုံးစိုက်ပြီး.. ဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့.. ဦးမောင်မောင်(ပြည်သစ်ညွှန့်ဝေ)ဆီမှာရှိပါတယ်..
သူ့ဆီမှာ..တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ.. ခေါင်းဆောင်တွေ..လက်မှတ်ထိုး..ဒါမှမဟုတ်..နှုတ်ကတိရထားတဲ့.. ခွဲမထွက်ဖူးဆိုတဲ့.. ကတိက၀တ်.. စာတွေ..အထောက်အထားတွေလည်း.. ရှိလောက်ပါတယ်..
လက်နက်ကိုင်ရခိုင်သူပုန်ခေါင်းဆောင်.. ဦးခိုင်စိုးနိုင်အောင်တို့.. ကရင်သူပုန်ခေါင်းဆောင်တို့နဲ့.. ပြည်ထောင်စုကခွဲမထွက်တဲ့အကြောင်းကတိပါတဲ့.. စာတွေ.. အင်တာဗျူး.. အသံဖိုင်တွေရှိနေတယ်..။
.. ပင်လုံစာချုပ်သဘောမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တာနဲ့..ယူအက်စ်ကစောင့်ပြီး.. ယူအက်စ်လာသမျှတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဆီက.. ခွဲမထွက်ပါဘူးဆိုတဲ့.. စကားကတိတွေ.. ရနိုင်သလောက်ယူထားတာလေ…
အဲ.. ယူထားမယ်ဆိုပြီး.. လုပ်ထားတာပါ…။ :harr:
ဒါဆို သူကြီး လူမျိုး ဘယ်နှစ်မျိုးဆီက ကတိစကားတွေ ရခဲ့လဲ ။ အဲ့ဒါတွေကရော ခုလိုချိန်မှာ အကျုံးဝင်သေးလားမသိဘူး။ ၀င်ရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ကုက္ကားပေါ့။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူတွေ ဘာပြောသွားတယ် ဘယ်လို ကတိထားသွားတယ်ဆိုတာလေးတော့ ကြားဖူးချင်သား
ဒီအတိုင်းသွားရင်တော့..ဧရာဝတီဟာ..အနှေးနဲ့ အမြန် နယ်ခြားမြစ်ဖြစ်မှာသေချာပါတယ်။ ရခိုင်က အချားအချား…ရှမ်းပြည်က ဟောင်လားဟောင်လား ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ တရုတ်ဘက်ပါသွားတဲ့ အပိုင်းကတော့ သက်သာမယ်ထင်ပါတယ်။ ကုလားဖက်ပါသွားတဲ့အပိုင်းကတော့……..မပြောတတ်ဘူး။သူပြောသွားတာတွေကတော့ တကယ်အားရစရာပါ။ အမှန်လည်း အမှန်ပါပဲ။ တကယ်ဖြစ်လာ မဖြစ်လာကတော့…………….. ။ အခုလောလောဆယ်ကြားရတဲ့ ရှမ်းမလေးတွေသတင်းကတော့ ရင်မောစရာ။ ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးပါ။
ပြောလို့သာပြောတာ ကျုပ်လေ့လာဘူးသလောက် ( အနီးကပ်ကိုလေ့လာဘူးတာ )
တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတာ ၉၉% လောက်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်
တကယ်တမ်း တရားဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာက ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့်
ပြည်သူတွေ မသိလို့ကတော့ ဒီသံသရာထဲက ထွက်နိုင်ဘို့ နည်းနည်းခက်သေးတယ်
US ဖယ်ဒရယ်လိုဖြစ်ဘို့ကတော့ ပိုဆိုးတယ်ဆိုနိုင်မလားဘဲ
ကိုယ့်လူတွေက လူမျိုးစွဲ အားကြီးလွန်းတယ်
ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာ အသာထား ဒီမိုကရေစီရရင်တော့ ဒို့လူမျိုးတွေ ဒို့ပြည်နယ်ကို ပိုင်ပြီလို့
တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဆိုရမယ်
ပြည်နယ်တွင်း ကျောင်းတွေမှာ တိုင်းရင်းသားစာကိုသင်ရမယ် တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံ ကို ကိုယ်စားပြုရမယ်
ဒါပေသိ မြန်မာအတန်းကျောင်း ဆယ်တန်းလောက်နေဘူးတဲ့လူငယ်တွေမှာတော့
ပြည်နယ်ထဲမှာ လူမျိုးစုတစ်ခုတည်းကို အမွှန်းတင်လို့မရဘူးဆိုတာကို 50% လောက်လက်ခံကြတယ်
အဲ့သည်ပြဿနာက တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်နေ့ တွေ လူမျိုးနေ့တွေမှာ စင်ပေါ်ကနေ လော်စပီကာနဲ့
အော်တဲ့ကောင်တွေမှာလည်း ပရောဂသိပ်မကင်းဘူးလို့ ဆိုရမလားဘဲ
ပိုဆိုးတာက ဒီကနေ ဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့လစ်သွားတဲ့သတ္တဝါတွေကလဲ
သူများနိုင်ငံမှာ လူမျိုးမရွေး သာတူညီမျှ နေခွင့်ရနေသည့်တိုင်အောင်တောင်
သက်ဆိုင်ရာနေ့တွေမှာ စင်ပေါ်တက်ပြီးလော်စပီကာနဲ့အော်ကြတာကလည်း စိတ်ပျက်စရာဘဲ
လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ အသိပညာပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အကျိုးကြီးနိုင်မယ်
အထက်က ဗျူးထဲက ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ ခွဲမထွက်ပါဘူးဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပေးသင့်တယ်
သာကီရွှေ ဗမာလူမျိုးကြီးတွေအနေနှင့်လည်း တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာ
အပြန်အလှန် အလေးထားဆက်ဆံမှု့တွေဟာ အားနည်းနေသေးတယ်ထင်ဘာဂျောင်း
( ကျုပ်ရဲ့အာဘော်ကတော့ စာကြီးပေကြီးအာဘော်တွေမဟုတ်ဘဲ အောက်ခြေလေ့လာမှု့နဲ့
ပြောတဲ့အာဘော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် စာအုပ်ထူထူဖတ်ပြီးအော်တဲ့နွားများအနေနှင့် အစာမကြေပါက
ကြိုက်သည့်လမ်းကိုရွေးနိုင်ဘာဂျောင်း michaeljonnyaungpu@hotmail.com )
ပါသလား။သူတို့က လွတ်လပ်သော ပြည်နယ်လိုချင်နေတယ်ခင်ည။ဘာမဆိုင်၊ညာမဆိုင် သောက်ကုလား
တွေကလဲလွတ်လပ်သောပြည်နယ်တစ်ခုကို ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းချင်တော့ အချင်းချင်းသောက်မှု့တွေနဲ့ ငြိကြတယ်ခင်ဗျ။ကျုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံဒေသတော်တော်များများမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့
နေချင်ဘူးဗျာ။ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် တိုင်းပြည်ထဲက ဘာသာတူငါနဲ့အတူတူဆိုတဲ့ကောင်တွေကြောင့် ကျုပ်ပါရောယောင်သောက်ညင်ကပ်ခံနေရတာပါ။နောက်ဆုံးပြောလိုတာက ခင်ဗျားဂျီးတွေးသလိုဖယ်ဒရယ်ပုံစံ ပေးကြည့်လိုက်ရင် ပြည်တွင်းစစ်ပိုရှည်သွားမှာမြင်ယောင်မိသေး။
ဖယ်ဒရယ်ပုံစံ ပေးပြီးယုံနဲ့တော်ပြီထင်နေလား။နိုင်ငံသစ်တောင်းဆိုဖို့က အသင့်ပဲခင်ဗျ။ပြည်နယ်တွေပြုတ်ပြီး တိုင်းတွေနဲ့သာဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို ခင်ဗျားဂျီးမြင်ချင်နေတာလား။ပြည်နယ်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ရင် နောက်ပြည်နယ်တစ်ခုကတောင်းဖို့ အကြောင်းပြချက်တွေက အသင့်ပါပဲခင်ဗျ။ထပ်ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံက ဒီအတိုင်းလေးပဲလှနေပါတယ်ဗျာ။ထပ်ပြီးပြိုကွဲအောင် ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတွေ US နဲ့မနှိုင်းစေလိုပါခင်ဗျာ။
အယူဝါဒမတူသလို အတွေးအခေါ်ချင်းကလဲမတူပါဘူးခင်ဗျ။တစ်ကယ့် လက်တွေ့ဘဝကိုမြင်ပြီးမှ သဂျီးလာတရားဟောပါ။ဖြစ်နှိုင်ရင် သမ္မတလာလုပ်ကြည့်စမ်းပါ။ခင်ဗျား ဖြစ်နှိုင်မဖြစ်နှိုင်လက်တွေ့ကျကျသိမြင်သွားပါလိမ့်မယ်။
သူ့ ပြည်နယ်က သယံဇာတတွေ လည်း မလိုချင်ပါဘူး ။
သူ့ ပြည်နယ်က ကျောင်းမှာလည်း သူ့စာပဲသင်ချင်သင်ပါ ။
သူ့ ပြည်နယ်ကို သူ့လူမျိုးတွေ ပဲ အုပ်ချုပ်ကြပါ ၊ ဗမာတွေ ဝင်မပါပါဘူး ။
ခွဲမထွက်ဘူး ဆိုတာ တစ်ချက်တည်းနှင့် ကျေနပ် နိုင်ပါတယ် ။
စစ်မှန်တဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ကို လက်ခံပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားတွေကို ပညာတော့ တတ်စေချင်တယ် ။
နို့မို့ရင် လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် အတွေးအခေါ်တွေ များလွန်းလို့ ။
အမေရိကားရဲ့..ပြည်နယ်အဆင့် တိုးတောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့.. ပေါ်တူရီကိုကျွန်းနိုင်ငံလေးအကြောင်း.. ဒီနေ့ဖတ်မိတာပါ..
တချို့ကျတော့.. ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကနေ”ခွဲမထွက်”ပဲ.. “တိုးဝင်”နေချင်ကြတာမျိုးရှိသား..
http://www.npr.org › News › Politics
Robert Siegel talks with Pedro Pierluisi, Puerto Rico’s resident commissioner in Washington, D.C., about support swelling on the island for U.S. statehood…….
အောက်ကသတင်းကတော့.. ယူအက်စ်ကနေခွဲထွက်ချင်သူတွေ.. ခွဲထွက်ခွင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းလေးပါ..
အိမ်ဖြူတော်ကတော့.. ခွဲချင်ရင်.. ခွဲနိုင်ကြပါသတည်းတဲ့..
Secession from the Union petitions continue to be signed by citizens
he 50 states’ citizens petitioning to secede from the Union since President Barack Obama was reelected on Nov. 6, 2012 continues with an incredibly high number of signatures.
Texas is the state which has – by far – the most signatures: 117,279 by Monday, Nov. 26, 2012.
According to the White House web site at WhiteHouse.gov, by Nov. 15, 2012, all 50 states of the United States have citizens who have begun petitions to the White House to secede from the United States.
Texas Secession from the Union (with 117,000 signatures) not endorsed by Gov. Rick Perry
The 50 States and the number of signatures on their petition as of Nov. 26, 2012: (Note: Some states have begun more than one petition which explains where there is more than one total of signatures on the petition after the state’s name.)
Alaska 7,153 and 7,994
California 14,959 and 2,326 and 2,026
Georgia 32,028 and 12,385 and 8,274
Illinois 5,363 and 5,280
Missouri 20,224 and 13,784
New Hampshire 5,556
New Jersey 14,284
New Mexico 5,137
New York 15,136 and 8,429
North Carolina 30,372
North Dakota 11,576
Ohio 11,833 and 8,546 and 4,642
Oklahoma 16,806 and 18,106 and 9,526
Pennsylvania 13,720 and 9,045
Rhode Island 4,747
South Carolina 24,322 and 15,215
South Dakota 14,295 and 6,588
Utah 8,287 and 6,800
Virginia 5,019 and 8,875
Washington 4,439 and 3,832
West Virginia 7,917
While there are different wordings of the various petitions most are simply worded in the same style as the most popular of the petitions which is Texas with its more than 117,000 signatures to date.
မြန်မာနိုင်ငံက ခင်ဗျားတို့ဆီက အမေဒစ်ကန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။
ပြိုကွဲလို့မရပါ။အကွဲလဲမခံနှိုင်ပါ။အခုတောင်သူများပိုင်နက်ထဲ မြန်မာ့မြေတွေ သောက်သုံးမကျသူတွေ
ကျုပ်တိုင်းရင်းသားတွေက ညီနောင်သားချင်းတွေပါဗျ။တိုင်းပြည်ကြီးအခုအတိုင်းပဲ လှပါတယ်ဗျာ။
ထပ်မပြိုကွဲပါရစေနဲ့တော့ဗျာ။အဲလို သွေးထိုးစကားတွေကိုလဲ မကြားချင်တော့ပါဘူး။
ဘာတွေလည်း ကိုရင်မိုးတိမ်ရယ်..။ တယောက်ထဲ”စိတ်နဲ့ကျုပ်” ရန်ဖြစ်နေတာလား..။
ကျုပ်တင်နေတဲ့… စာတွေသေသေချာချာ ဖတ်ရဲ့လားဟင်င်င် ?
ဖယ်ဒရယ် ဆိုတာ ခွဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ နားလည်လိုက်ပါတယ်…။
ဒါပေမယ့်…ခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားလာကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို တုန့်ပြန်မလဲ ဆိုတာလည်း
ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု လုပ်သင့်မလုပ်သင့်…
လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပုံလေးပါ တစ်ဆိတ်လောက် !!!!!!
ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာ.. ခွဲထွက်တာမဟုတ်ဖူးလို့လည်း.. ပြောလို့မရပါဘူး..။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့.. ဦးခွန်ထွန်းဦးပြောတာက.. မခွဲထွက်ဖူး.. အာမခံတာပါ…
ရှေးက.. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ခဲ့သလို.. တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက.. တစုံတခု..စာချုပ်နဲ့.. အာမခံရင်ပြီးတာပါပဲ..
ရွာတရွာမှာ.. အိမ်ထောင်စု ၁၀၀ရှိတယ်ဆိုပါတော့..။ အလိုအလျှောက်ဖယ်ဒရယ်ပုံစံဖြစ်နေတာပါပဲ..။
အိမ်ထောင်စုတစုရဲ့.. အ်ိမ်ထောင်ဦးစီးက.. ငါတို့အိမ်ထောင်စုက.. ဒီရွာထဲမပါလိုဘူး…။ ခွဲထွက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်..
သူ့အိမ်မက.. သူ့အိမ်က.. သူ့မိသားစုဝင်တွေ.. သဘောတူလားကြည့်ရမှပါ…
အားလုံးသဘောတူနေတယ်.. သေချာမှတော့.. ခွဲထွက်စေသတည်းပေါ့နော..
ခွဲထွက်ပြီးရင်တော့.. ရွာလမ်းသုံးပြီး.. လယ်ထဲသွားမယ်ဆို.. ပြဿနာစပါပြီ..။
ရေ..မီး.. စတာတွေဘယ်လိုသုံးမလည်း.. ရွာလုံခြုံရေး.. အုပ်ချုပ်မှု..တရားရေး.. စတာတွေ.. ဘယ်လိုလုပ်မလည်း.. တွေးစရာတွေရှိလာပါပြီ..။
ရွာထဲကနေ.. ခွဲထွက်အိမ်ထောင်စုက.. ဘယ်လိုရပ်တည်.. လုပ်ရမှာလည်း.. အင်မတန်တွေးစရာဖြစ်မှာပါ..။
သူတို့ကို.. ဘေးအိမ်ကလူတွေက..ရွာသူားတွေက.. မခွဲထွက်ရဘူးပြောခွင့်မရှိပါ…။
လူသားတိုင်း.. တန်းတူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့.. အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တွက်ချက်ချိန်ဆရမယ်ဖြစ်ပါတယ်..
ဘေးနားက.. မိသားစုများတဲ့..အိမ်ထောင်စုကြီးတခုက.. ဟေ့.. မင်းတို့မခွဲထွက်ရဘူး.. ဒီရွာထဲနေကိုနေရမယ်ပြောခွင့်ရှိတယ်ထင်ပါသလား..
ရွာဦးကျောင်း ဘုန်းကြီးက.. အဲဒီအိမ်ထောင်ဦးစီးခေါ်ပြီး.. ဆုံးမခွင့်..ရှိတယ်ထင်ပါသလား..။
အဲဒါ.. ဖယ်ဒရယ်မိုဒယ်လေးပါပဲနော.. :harr:
မြေကြီးတွေ.. နယ်နမိတ်သတ်မှတ်..ဒါကကိုယ်ပိုင်တယ်.. ဒါကသူပိုင်တယ်.. လုပ်တာကို.. ဂေါတမဗုဒ္ဓက.. ရယ်တော်မူပါတယ်..။